Maxaa ExactTarget iyo CoTweet xasaasiyad uga dhigaya | Martech Zone
Waa maxay sababta ExactTarget iyo CoTweet ay dareen u yeelayaan
Arbacada, Maarso 3, 2010 Sabti, Noofembar 28, 2015 Douglas Karr
Markii hore warka waan yara yaabay. ExactTarget iyo CoTweet? Email iyo Twitter? Waxay iigu muuqdeen ilma adeerro fog, aniga si sax ah uma helin.
Caawa waxaan la hadlay Chris Baggott, oo ah aasaasaha Xaqiiqda hadana ah agaasimaha guud Compendium Blogware. Chris ma dhihi karo waxyaabo badan oo ku filan oo ku saabsan guuritaanka, aad ayuu ugu faraxsanaa Scott Dorsey… wuxuuna sharaxay sida ay dhab ahaan macno u samaynayso:
Email-ka iyo Twitter-ka isuma eka. Labaduba waa ikhtiyaari ikhtiyaari ah iyo qaababka isgaarsiinta ee qaabka riixista.
CoTweet waa nidaam maamul shirkadeed oo loogu talagalay Twitter, ExactTarget waa madal suuq geyn email ah. Ganacsiyada la soo jiitay mid waliba waa rajo midba midka kale.
CoTweet iyo Shaybaarka Warbaahinta Bulshada sii Silihadhuudh Shirkadda dooxada oo leh aragti Silicon Valley.
CoTweet waxay u oggolaaneysaa ExactTarget inay ku dhex milmaan Warbaahinta Bulshada iyada oo aan halista weyn ama kharashka laga soo iibsan mid ka mid ah codsiyada kale ee bulshada halkaas ka jira.
Waa hab fiican oo loo yaqaan 'ExactTarget' si ay suulasha ugu dhex gasho warbaahinta bulshada. Qaarkood waxay ku doodi karaan in iimaylku ahaa midkii asalka ahaa ee bulshada social Kuma doodi karo taas. Waxaan isha ku hayaa inaan arko waxa ku xigi doona ExactTarget shakhsiyanna waan ku faraxsanahay in CoTweet ay hadda xidido ku leedahay Indianapolis! Sidoo kale waan ku faraxsanahay inaan dib loo magacaabi doonin ExactTweet! 🙂
Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay Scott Dorsey! Scott wuxuu ahaa kii aan ku wareystay ExactTarget maalmihii hore - waligiisna kamuu lumin hamigiisa, xamaasadiisa iyo xiisaha shirkadda. Shaki kuma jiro tani inay tahay uun cutubka koowaad ee kuwa imanaya! Hambalyo ExactTarget iyo CoTweet!
Tags: xikmadsaxsanscott dorsey
Warbaahinta Bulshada iyo Maareynta Diidmada
Daabacaadda iyo Waqtiga-Real
Mar 4, 2010 at 11: 40 AM
Falanqeyn xiiso leh, Doug. Sideed u aragtaa ET inay lacag ku samaynayso CoTweet?
Ku soo dhawow Xusuusin!
Warshadaha emaylka, sidaad ogtahay, waxay leeyihiin waxyar baa iska beddelay labadii sano ee la soo dhaafay. Dadyahow waxaad ka mid tihiin dadka yaqiinsaday in suuqleydu aysan rabin inay ku daraan adeeg kale - waxay rabaan inay yareeyaan adeegyadooda ayna fududeeyaan istiraatiijiyadooda. Waxaan ku sii tuuraynaa kanaalo cusub iyaga - tanina waxay u baahan tahay otomaatig badan, iyo qalab fudud.
Uma maleynayo inay tahay wax badan oo ku saabsan ExactTarget sameynta lacag ka badan difaaca lacagta ay hadda sameynayaan. Waxaa jira fursad lagu otomatigeeyo oo loo horumariyo shaashadda isgaarsiinta ee suuqleyda si ay ula tacaalaan dhammaan bixitaanka, isgaarsiinta ku saleysan rukhsadda. Haddii ExactTarget uusan horumarin, iyagu ma sii wadi doonaan koritaanka. Tani waa tallaabo dhankaas loo qaaday.
Mar 9, 2010 at 8: 42 AM
Lagu heshiiyay. Waxaan sidoo kale si dabacsan ugu yeernay bulshada tiknoolajiyadda halkan "Silicon Prairie." 🙂
Soo iibsiga CoTweet waa mid aad u xiiso badan oo markii tikniyoolajiyaduhu isu yimaadaan, waxaan arki doonaa wax aysan cid kale bixin karin marka loo eego isgaarsiinta isdhexgalka.